कोरियाले आगामी हप्तादेखी देशभरका विधालयहरु सुचारु गर्ने ! – korea pati
कोरियाले आगामी हप्तादेखी देशभरका विधालयहरु सुचारु गर्ने !
May 4, 2020 Korea patiLeaveaComment on कोरियाले आगामी हप्तादेखी देशभरका विधालयहरु सुचारु गर्ने !
सोल- दक्षिण कोरियाले विद्यायलहरुलाई आ–आफ्ना विद्यार्थीहरु फिर्ता बोलाउने अनुमति दिने बताइएको छ । देशमा कोरोना भाइरसको प्रकोप घट्दै गएकोले अर्को हप्तादेखि देशका विद्यालयहरु पुनः सञ्चालनमा ल्याइने जनाइएको छ । कोरोनाभाइरसको प्रकोप घट्दै गइरहेकोले मे १३ बाट उच्च माध्यामिक विद्यालयका विद्यार्थीहरु र मे २० बाट निम्न माध्यामिक स्तरका विद्यार्थीहरुलाई
विद्यालयमा आउने अनुमति दिइने शिक्षामन्त्री यो इअन हाएले सोमबार बताएका छन् । दक्षिण कोरियामा कोरोना भाइरस फैलिएपछि करिव ५४ लाख विद्यार्थीहरुले गत अप्रिल ९ देखि अनलाइन कक्षा लिइरहेका छन् । दक्षिण कोरियाको हालका हप्ताहरूमा कोरोना भाइरसको प्रकोप निरन्तर रुपमा घटिरहेको छ ।
अधिकारीहरूले समाजिक दूरी नियमहरूमा पालाना गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिरहेका छन् । करिब एक हप्ता अगाडी दक्षिण कोरियाले आठ थप भाइरस संक्रमित भेटिएपछि १० हजार ८०० जनामा कोरोना भाइरस सक्रमण देखिएको छ । यस कोरोना भाइरस संक्रमणबाट दक्षिण कोरियामा २५२ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
कोरियाको जेलमा ८ नेपाली
दक्षिण कोरियाली सरकारले अबैधानिक कामदारलाई कोरियन नागरिक सरह राहत दिने !
नेपाली यूवा मिनोद मोक्तानको कोरियाको भोगाई तथा अबैधानिकताको पिडामा आधारित ‘आन्यङ्ग मिनु’ प्रिमियर शो हुने !
May 14, 2020 Korea pati
ईन्छन अन्तरास्ट्रिय विमानस्थलमा रोवोट द्वारा ज्वरो नापिने !
June 20, 2020 Korea pati
सरकारले नेपाली श्रमिकलाई लकडाउन भएतापनी कोरिया लैजान सहमति दिने
April 26, 2020 Korea pati